Yini ingwenya ephupha ngayo owesifazane, ingwenya endlini. Iphupho lengwenya.
Yini engabangela iphupho lapho ubona ingwenya
Ukwesaba, ukudideka, ukuphelelwa yithemba, isifiso sokubalekela - mayelana nemicabango enjalo oyomvakashelayo, kwenzeka ukuba uhlangane nengwenya yangempela, inzalo eyiseduze yama-dinosaurs ezinsalela. Ukungazi kahle kwethu, usebenzisa umfanekiso wengwenya, uzama ukudlulisa isixwayiso mayelana nengozi engase ihambe phezu kwakho ngokushesha.
Ingwenya iphupha ngani ngowesifazane?
Uma ingwenya endlini iphuphile, kusho ukuthi uhlala noma ngekusasa, umuntu ongeke ukwazi ukuthola indawo evumelana naye angaphila. Kuzoba khona amahlazo, ukuphikisana, ukuphikisana ngokuphindaphindiwe. Enye incazelo ithi ikhaya lakho, noma ngokuqondile izakhamuzi zendlu, lisengozini. Ingozi enjalo ingase ingabi usongo ngqo ngokomzimba. Cishe lesi yisifo, ukulimala ngengozi noma ukulimala, ingozi.
Ukuphupha ingwenya okukuxosha - kusho ukuthi esikhathini esizayo esiseduze uzobhekana nezinkinga ezinkulu. Ngokuvamile lezi zinkinga zobuntu bomuntu obuhlobene nomunye umuntu. Kungaba isihlobo, indoda, isoka, abazali. Uma ephupheni wakwazi ukuphunyuka enkonkeni, kusho ukuthi uzobhekana nale nkinga. Uma kungenjalo-ke ulungiselele izingxabano eside nokungaqondani kwabanye.
I-Dream ingwenya emanzini - kubalulekile ukucabangela ukuthi lokhu kuyindawo eyakhelwe kuyo izilwane eziphilayo, okuvela kuyo ngokukhohlisayo. Kuwe, lokhu kusho ukuthi abangane bangakunika ingulube, futhi lokhu kuzokwenziwa yibo ongacabangi okungenani. Lokhu akusho ukuthi akukho lutho olungenziwa. Leliphupho liyisixwayiso ngaphezulu. Vele uzame ukuqapha, ukwethemba abantu abaphansi futhi uphumelele impumelelo.
Ukulala mayelana nempi phakathi kwezingwenya - qaphela, mhlawumbe phakathi kwabahlobo bakho kuyoba nenxabano enkulu. Ungazibandakanyi kuwo futhi ube nguhlangothi lomunye umuntu, ngaphandle kwalokho uzozizwa uhlupheka. Uma ungaphazamisi, izikhalazo zizokhohlwa ngokushesha futhi konke kuzobuyela esimweni esijwayelekile. Kudingeka kuphela ukungenelela - kunethuba elikhulu lokuxabana konke naphakade.
Sibone ngephupho ukuthi ama-crocodiles ahlasela kanjani umuntu-kufanelekile ukulungele ukubhekana nenkinga engasombulula kuphela ngosizo lwabangane abathembekile.
Ingwenya efile ephuphile - esikhathini esizayo ulindele ukuphila okuthulile, ngaphandle kokuphakama okungazelelwe noma phansi. Izinkinga ezinkulu zizokunciphisa, noma kunjalo, ngeke ubone impumelelo enkulu.
Ingwenya yahlasela, kodwa walwa - kusho ukuthi maduzane ubunzima obhekene nabo buzobe buba khona. Lokhu kungenye yamaphupho ngezingwenya, okuthembisa ukuthi uphumelele emsebenzini wakho.
I-crocodile ihlasele futhi iphumelele - kuyoba yisikhathi esifushane ngaphambi kokuba abantu obecabanga ukuthi bangabangani bakho bazokukhombisa ngaphakathi kwabo ababolile ngaphakathi.
Uma ikhanda lengwenya liphupha, lihlukaniswe nomzimba - lokhu kubonisa ukuthi othile uhlehlise ngokumelene nawe okubi, kodwa waguqula izinhlelo zakhe. Embuthanweni wabangane bakho abaseduze kukhona abantu abazinikezele kuwe, futhi kukhona nalabo abafisa ukulimaza.
Uma sifika, kuyacaca ukuthi ingwenya ibonisa ukuhlakanipha, intukuthelo, ukungabi nabungane. Okubi kakhulu ngalokhu ukuthi konke lokhu kuzovela kubantu obecabanga ukuthi bangabangani. Sincoma ukuthi uhlolisise abantu abakuzungezile, ukuze ungaphumeleli.
Ngakho uma uphupha ngwenya, qaphela kakhulu esikhathini esizayo esiseduze. Bheka nxazonke, ungacabangi okubi ngawe. Uma ungayinaki iphupho, ungahlupheka ngenxa yokungakhathaleli kwakho.
Bulala inyoka: ingabe kufanelekile ukwesaba ukuhumusha?
Igazi elivela emlonyeni wakhe liphupha ngani?
Yini ifoni ephupha ngayo? Ukuhunyushwa kwezincwadi zamaphupho adumile
Ukuzala umfana ephusheni: ngabe kungaba yini?
Ukuchazwa kokulala: ukuzala intombazane
Ukuchazwa kwamaphupho: Iphupho lamazambane liphikisana?
Indlela yokwenza umshado ungalibaleki
Zokupheka zasendulo zezitsha zaseFrance
Kwaziwa ukuthi uSergei Lazarev uchitha isikhathi sokuvakasha e-Italy, isithombe
I-anyanisi amasongo obhiya
Indlela yokusinda isahlukaniso sowesifazane
Amakhambi omphakathi wokulala
U-Amber Heard wakhuluma ngemizwa ngomyeni wakhe
Amazambane casserole ngamakhowe kanye negalikhi
Ukupheka okuhle kwetafula lonyaka omusha
Amakhukhi nge-chocolate ne-vanilla
Indlela yokukhetha ingubo yomshado efanele?
Indlela yokususa izipikili ekhaya
I-Horoscope yezinhlanzi ze-tiger ngo-2010
Izimo zokubheka ucansi phakathi kwamadoda ase-Arab
Sandwich hot nge ushizi kanye neqanda
Amaqiniso amangazayo ngamavithamini